musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Chiso Chako ndiyo ID yako nyowani yekufamba: Biometrics yakanaka!
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Hurumende Nhau • nhau • Technology • ushanyi
Nemamwe magwaro ekutarisa COVID-19, nguva yekugadzirisa panhandare dzendege iri kutora nguva yakareba. Pre-COVID-19, avhareji yevafambi vakapedza maawa 1.5 mukufamba-famba (cheki-mukati, chengetedzo, kudzora muganhu, tsika, uye kutakura zvinhu). Yazvino data inoratidza kuti nguva dzekugadzirisa nhandare dzendege dzakabhururuka kusvika kumaawa matatu panguva yepamusoro-soro nemavhoriyamu ekufamba angosvika makumi matatu muzana epre-COVID-3 mazinga.
Sangano reInternational Air Transport Association (IATA) rakazivisa mhedzisiro ye2021 Global Passenger Survey (GPS), iyo yakapa mhedziso huru mbiri:
Vatyairi vanoda kushandisa biometric identification kana ichikurumidza mafambiro.
Vafambi vanoda kupedza nguva shoma vachimira mumutsetse.
“Vatyairi vataura uye vanoda kuti michina ishande nesimba, saka vanopedza nguva shoma ‘vachigadziriswa’ kana kumira mumitsetse. Uye ivo vakagadzirira kushandisa biometric data kana ikaunza iyi mhedzisiro. Migwagwa isati yakwira, tine hwindo remukana wekuona kudzoka kwakanaka pakufamba mushure medenda uye kuendesa budiriro yenguva refu yevafambi, ndege, nhandare dzendege nehurumende, "akadaro Nick Careen, Mutevedzeri weMutungamiriri Mukuru weIATA weMabasa. Chengetedzo, uye Chengetedzo.
73% yevafambi vanoda kugovera yavo biometric data kuvandudza nhandare yendege (kubva pa46% muna 2019).
88% ichagovera ruzivo rwekubvakacha isati yasimuka kuti igadziriswe nekukurumidza.
Vanopfuura chikamu chimwe muzvitatu chevafambi (36%) vakaona kushandiswa kwebiometric data pakufamba. Pane ava, 86% vakagutsikana nechiitiko ichi.
Dziviriro yedata inoramba iri nyaya yakakosha ne56% ichiratidza kunetsekana nekutyorwa kwedata. Uye vafambi vanoda kujekeswa kuti ndiani data ravo riri kugoverwa (52%) uye kuti rinoshandiswa sei / rinogadziriswa sei (51%).
55% yevafambi vakaona mitsetse pakukwira senzvimbo yepamusoro yekuvandudza.
41% yevafambi vakaratidza kumira mumitsetse pakuongororwa kwekuchengetedza sechinhu chakakosha pakuvandudza.
38% yevafambi vakaratidza nguva yekumira pamuganhu wekutonga / kutama senzvimbo yepamusoro yekuvandudza.
Kuwedzera kukuru kwekumirira kuri pakutarisa-mukati uye kutonga kwemuganho (kubva kune dzimwe nyika uye kutama) uko magwaro ehutano hwekufamba ari kuongororwa zvakanyanya semagwaro emapepa.
Izvi zvinodarika nguva iyo vafambi vanoda kushandisa pamaitiro panhandare yendege. Ongororo yacho yakawana kuti:
85% yevafambi vanoda kushandisa isingasviki maminetsi makumi mana neshanu pamaitiro panhandare yendege kana vachifamba nemukwende wemaoko chete.
90% yevafambi vanoda kushandisa isingasviki awa imwe chete pamaitiro paairport kana vachifamba nebhegi rakachekwa.
IATA, ichishanda nevanobata maindasitiri, ine zvirongwa zviviri zvakakura izvo zvinogona kutsigira budiriro yekukwira kwendege post-denda uye kupa vafambi ruzivo rwekukurumidza rwavari kuda.
IATA Kufamba Pass imhinduro yekugadzirisa zviuru nezviuru zvehutano hwekufamba zvinodikanwa nehurumende. Iyo app inopa yakachengeteka uye yakachengeteka nzira yekuti vafambi vatarise zvinodiwa parwendo rwavo, kugamuchira mhinduro dzebvunzo uye kuongorora zvitupa zvavo zvekudzivirira, simbisa kuti izvi zvinosangana nekwavanoenda uye zvekufambisa zvinodikanwa uye kugovana izvi zvisingaite nevakuru vehutano nendege vasati vasimuka nekushandisa. e-magedhi. Izvi zvinoderedza mitsetse uye kutsvikinyidzana kwekuongororwa kwemagwaro — kuti zvibatsire vafambi, vendege, nhandare dzendege nehurumende.
Chimwe ID chirongwa chiri kubatsira indasitiri yekuchinja kuenda kuzuva iro vafambi vanogona kufamba kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe gedhi vachishandisa imwe chete biometric yekufamba tokeni senge kumeso, zvigunwe kana iris scan. Ndege dzinotsigira zvakanyanya chirongwa ichi. Chinonyanya kukosha iko zvino ndechekuona kuti pane mutemo uripo kutsigira chiono chechiitiko chekufamba chisina mapepa. Chitupa chimwe hachingoite kuti maitirwo ashande zvakanaka kune vafambi, asi zvakare kubvumira hurumende kushandisa zviwanikwa zvakakosha zvakanyanya.
“Hatigone kungodzokera kumamiriro akaita zvinhu muna 2019 totarisira kuti vatengi vedu vagutsikane. Pre-denda takanga tichigadzirira kutora-sevhisi kune inotevera nhanho neOne ID. Dambudziko rinoita kuti mapatya-zvipikirwa zvekushanda uye kuchengetedza-mutengo zvakanyanya kukurumidza. Uye isu tinoda chaizvo matekinoroji senge IATA Travel Pass kuti ugone kugonesa-sevhisi kana kupora kuchakurirwa nemapepa echeki. Zvabuda zveGPS chimwezve chinoratidza kuti shanduko inodiwa,” akadaro Careen.
Mhinduro dzeGPS dzakabva pamhinduro 13,579 kubva kunyika zana nemakumi masere nematanhatu. Ongororo iyi inopa muono wekuti vafambi vangadei kubva muruzivo rwavo rwekufamba nendege. Shanyira izvi batanidzo kuwana ongororo yakakwana.